နအေိမျဆိုငျရာ ဗဟုသုတမြား | SCG Building Materials
မေး : SCG Smartwood သဈသားပွားတှကေို တပျဆငျပွီး နှဈထပျကာ သဈသားနံရံ ပွု လုပျလို့ရပါသလား ?
SCG Smartwood တှကေို နှဈထပျနံရံတှအေဖွဈ အသုံးပွုတပျဆငျနိုငျပါတယျ။ဖရိနျပုံစံမှာ 3×1.5 လကျမ အရှယျအစားရှိသငျ့ပွီး 23 မီလီမီတာနှငျ့ ကှကျတိဖွဈနရေပါမယျ။SCG
ဘုတ်ပြားဆိုတာ ပို့လန်ဘိလပ်မြေ နှင့် ခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားသောအခြားပစ္စည်းများပါဝင် ဖွဲ့စည်းထားသော ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
အချောကိုင်ထားတဲ့အုတ်နံရံကို အေးမြအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
အေးမြနေတဲ့နံရံတွေက အပူပိုင်းဒေသတွေမှာ အိမ်ကို အေးမြစေပြီး စွမ်းအင်အသုံးပြုခြင်းကို လျော့ချပေးပါတယ်။
အစားထိုးသဈ ဆိုသညျမှာ သဈသားအစဈ နရောတှငျ အစားထိုးအသုံးပွုသောအရာကို ဆိုလိုပါသညျ။သို့သျော တပျဆငျရာတှငျ သဈသားအစဈ နှငျ့မတူ ကှဲပွားခွားနားပါတယျ။
SCG စမတ်ဘုတ်မျက်နှာကျက်ပြားဖြင့် လင်းလက်တောက်ပပြီးလှပသောပုံစံကို ဖန်တီးရယူလိုက်ပါ။
သင့်အိမ်မျက်နှာကျက်ကို သူမတူထူးခြားလှပအောင် ဖန်တီးလိုက်ပါ။ SCG စမတ်ဘုတ် မျက်နှာကျက်များသည် သင့် အိပ်ခန်း၊ ဧည့်ခန်းနဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ဘယ်နေရာမျိူးနှင့်မဆို လိုက်ဖက်မှု ရှိနေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Mortarဘိလပ်မြေကို အချောကိုင်ခြင်းအနေဖြင့် ပေါ့ပါးကွန်ကရစ်အုတ်စီရာမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါလား?
Mortarဘိလပ်မြေကို ပေါ့ပါးကွန်ကရစ်အုတ်တွေကို အသုံးပြုသလိုမျိူး သာမန်အုတ်နီခဲ (သို့) ကျောက်စလစ်ဘလော့တုံးတွေမှာ အချောကိုင်လို့ရနိုင်ပါသလား။
မျက်နှာကျက်ပြားဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို့ သိကြတဲ့အတိုင်း အများအားဖြင့် ရိုးရှင်းပြီး ချောမွတ်တဲ့မျက်နှာကျက်ပြားများပင် ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ပိုပြီးတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ဒီဇိုင်းဖန်တီးလို့ရနိုင်ပါတယ်။ အိမ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပိုပြီး သက်ဝင်ထင်ရှားလှပစေသလို အပူဒဏ်ကိုလည်း ခုခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။
ကြာရှည်ခံဖို့အတွက် ပေါ့ပါးသောအုတ်နံရံများ တပ်ဆင်ခြင်း
ကြာရှည်ခံတဲ့အိမ်ဖြစ်ဖို့အတွက် လူတိုင်းလိုလို ဆန္ဒရှိကြပါတယ်။ သူ့တည်ဆောက်ပုံ မှာ ဝန် ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အမိုးကာများကလည်း အပူ နှင့် မိုးဒဏ်လည်းခံနိုင်ပြီး နေထိုင်သူတွေ အတွက် မည်သည့် အန္တရာယ်မျှ မကျရောက်အောင်လည်း ကာကွယ် ပေးနိုင်ရပါမယ်။ နံရံ ဆိုသည်မှာ ပိုင်ရှင်ရဲ့ ပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် ကြာရှည်ခံပြီး သက်ရောက်မှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။